Sidee sanad cusub ku bilaawi kartaa? (maqaal). – Filimside.net
Sidee sanad cusub ku bilaawi kartaa? (maqaal).
Si aad sanadka cusub u bilowdid isla markaasna guul uga keentid waa kuu muhiim in aad arimaha hoos ku xusan dhug u lahaataa.
QIIMEEY SANADKII HORE.
Markaad ka fikireyso inaad talaabo horay u qaado sanadka cusub waa qasab inaad dib u milicsataa dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee sanadkii hore, sidoo kalana aad dhacdooyinkaas daraaseysaa adigoo dhowr su’aalood iska weydiinayo.
Sidoo kale waa kuu muhiim inaad dhameystirtaa mashaariicdii aad sanadkaas bilowday kuwaas oo aan waqgti badan kaa qaadaneynin hadii si kale loo dhigana gabo gabo marki horeba ahaa, waxaana arimahaas loo sababeynayaa si aad uga takhalusto dhamaan arimaha aad Is leedahay caqabad wey kugu noqon karaan uguna soo dhaweyso sanadka cusub caqli nadiif ah kana maran qeybna ka aheyn arimihii hore.
Tanina waxay kaa caawineysaa inaad dajisato kaarto iyo goolal si aad nolol cusub sanadka cusub u bilowdid.
HIIGSIGA OO AAD DAJISAA WAA MUHIIM.
Markii aad qorsheyneysid sanad cusub waa kuu muhiim inaad leedahay hiigsi iyo yool kuwaasoo ay suurto gal tahay inaad ku guuleysan kartid, kadibna aad bilowdidi qorshayaashii aad hiigsigaas ku fulin laheyd si ay riyadaada kuugu rumowdo.
QORSHEEY INAAD WAQTI KU FILAN LA QAADATO QOYSKAAGA.
Si aad noloshaada isbadal dhab ah ugu sameyso sanadka cusub waa kuu muhiim inaad yareyso waqtiga aad shaqada ku qaadaneysid isla markaasna aad ku badashid waqti aad qosykaaga iyo saaxiibadaa la qadatid taasoo noloshaada waxbadan ka caawin doonto.
JOOJI HAB-DHAQANKA XUN.
Waxay kamid tahay arimaha muhiimka ee fiican inaad sannaddka cusub ku bilowdid waxaana xusid mudan in inta badan si uu qofka yoolkiisa u gaaro ay muhiim u tahay inuu joojiyo hab-dhaqankiisa xun kuna badalo hab-dhaqan wanaagsan taasoo qofka ku kalifeyso inuu qaado talaabo weyn taasoo qofka kalsoonida uu u baahanyhay siineyso.
Hadaba akhristow side rabtaa inaad sanaka cusub ku bilowdid?